Afrika, 01 June 2018
Khamiis 1 June 2018
Al-Shabaab oo weeraray Moqokori
Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday galinkii dambe ee maanta degaanka Moqokori ee gobalka Hiiraan, halkaas oo hore ay ugu sugnaayeen ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya.
Amnesty: Ethiopia ha kala dirto Liyu Boolis
Hay’adda xuquuqda aadnaha ee Amnesty International ayaa ugu baaqday dowladda Ethiopia inay si deg deg ah u kala dirto ciidamada booliska is-maamulka Soomaalida ee Liyu Boolis, sababo ay ku sheegtay inay si sharci darro ah dad ugu dilayaan gobolka Oromada.
Kenya oo ka cabsi qabta weeraro Al-Shabaab
Booliska iyo hay’addaha amniga Kenya ayaaa shalay sheegay in maleeshiyo badan oo ka tirsan al-Shabaab ay isku-uruursanayaan deeggaanada u dhow xadka Kenya iyo Somalia.
Dibadbaxyo maanta ka dhacay Nairobi
Nairobi: Farmaajo iyo Uhuru oo Kulmay
Madaxweynayeyaasha wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo kullan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay arrimaha muranka badan dhaliyay ee xuduudaha labada dal iyo sidoo kale la dagaalanka arggagixisada.
Afduubyo la sheegay in ka socdaan Libooyo
Libya: Tahriibayaal Baxsaday
Goobta ay dadkani ka baxsadeen ayaa ku taala magaalada Bani Waliid, waxaana arrintan ka dhashay in kooxaha wax tahriibiyaa ay rasaas ku fureen dadkii baxsaday iyaga oo dhowr qof dilay qaar kalena dhaawacay.
Jabuuti: Xildhibaanno Eedeyey Dowladda
Qaar ka mida xil dhibaanada mucaaridka ee baarlamanka Jabuuti aya ku dhaliiley dowladda Jabuuti sidey u maareysey dhibaatooyinka biyaha fadhiya magaalada ee ay kaga tageen roobabki dhawaanta ku da'ay
Zimbabwe oo baadi-goobeysa dhaymankii Mugabe
Guddi ka tirsan baarlamanka dalka Zimbabwe ayaa la filayaa inay ku cadaadiyaan madaxweynihii hore ee dalkaas Robert Mugabe inuu keeno caddeymo muujinaya halka ay ka baxeen dhayman lagu qiyaasay 15 bilyan oo dollar, intii uu xukunka hayey.
Qunsulka Jabuuti ee Washington oo geeriyooday
Cudurka Ebola oo mar kale ka dillaacay Congo
Dowlada Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Congo ayaa ku dhawaaqday inuu dalkeeda mar kale ka dillaacay cudurka Ebola.
VOA oo Baaq u Dirtay Madaxweynaha Burundi
Agaasimaha Fulinta ee Hey’adda BBG oo ah hey’adda maamusha dhamaan laamaha kala duwan ee VOA John F. Lansing ayaa Isniintii shalay ugu baaqay madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza, inuu ka laabto go,aanki ay dowladiisa ku mamnuucday Idaacadda Voice Of America.